Shirkii Nabadda Gaalkacyo oo qodobo laga soo saaray – WARSOOR
Shirkii Nabadda Gaalkacyo oo qodobo laga soo saaray
Gaalkacyo – (warsoor) – Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo ku kulmay magaalada Gaalkacyo ayaa ka wada hadlay xalinta colaada Gaalkacyo, iyadoo kulankooda ay goob joog ka ahaayeen Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid iyo Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya.
Shirka ayaa socday mudo, waxaana laga soo saaray qodobada dhowr oo ay ka mid yihiin.
1: In xabbada la joojiyo oo la magacaabo guddi isku dhaf ah.
2: in labataanka bishaan la isugu tago magaalada Kismaayo .
3: iyo In si dhab ah looga wada hadlo waxyaalaha muranka dhaliyay.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo ka hadlay heshiiska ayaa labada dhinac ku adkeeyey in si adag loo xoojiyo heshiiska islamarkaana la fuliyo.
Sidoo kale wakiilka QM ee arimaha Soomaaliya Mcheal Keating ayaa isaguna tilmaamay in Qaramada Midoobay ay muujin doonto kaalinteeda islamarkaana door wanaagsan ay ka ciyaari doonaan dhirgalinta heshiiska maanta la gaaray.